Ny Huawei Mate 30 dia ho mpaninjara indrindra araka ny voalazan'ny Huawei | Androidsis
Manantena i Huawei fa ho lafo indrindra ny Mate 30
Vao herinandro mahery izay Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Huawei Mate 30. Ilay avo lenta vaovao ny marika sinoa, izay niavaka indrindra tamin'ny tsy fisian'ny rindran-Google sy ny Play Services napetraka aorinan'ny toerana misy anao. Fanovana izay zava-dehibe ary hitan'ny maro ho olana lehibe amin'ireo finday ireo ny fahafahany mivarotra tsara eny an-tsena.
Ny Huawei Mate 30 dia telefaona kalitao, navelany tamintsika endri-javatra vaovao maro amin'ny lafiny endri-javatra. Noho io antony io, avy amin'ny marika noheverin'izy ireo fa afaka mahomby eo amin'ny tsena izy ireo. Raha ny tena izy dia antenain'izy ireo fa hivarotra tokoa ny varotra amin'ity taranaka ity, araka ny hitantsika.
Na eo aza ny sakana apetraky ny Etazonia, dia manohy mino ilay orinasa fa afaka mahomby ny Huawei Mate 30. Tombanana ho azy ireo izany 20 tapitrisa eo ho eo ny unit no hamidy an'ity haavo vaovao ity. Tarehimarika iray izay tsy isalasalana fa milaza mazava ny andrasan'ny orinasa amin'ity lafiny ity.
Varotra avo, mety mihoatra ny an'ny Mate 20 aza izany. Na dia amin'ity tranga ity aza dia azo atao izany satria ny telefaona dia misy 5G, zavatra iray izay mety hampiroborobo ny varotra any amin'ny tsena sasany. Fa tanjona kendrena ho an'ny marika izy ireo.
Ny fanontaniana dia izao dia hoe rahoviana ireo Huawei Mate 30 no hahatratra ny tsena ary raha toa ka tena hahazo fivarotana toa ireo izay andrasan'ny marika sinoa. Hiankina betsaka amin'ny hoe io na tsia azo atao ny mametraka fampiharana avy amin'ny Google, Google Play ary ny hafa toa ny WhatsApp amin'ny telefaona, amin'ny fomba tsotra. Raha azo atao, dia hamidy.
Noho izany, manantena izahay fa hanana angona bebe kokoa amin'ity herinandro ity ny fanombohana ity farany vaovao ity ny marika sinoa. Mampanantena ny ho isan-karazany izay mivarotra tsara, raha mbola azon'izy ireo ampiasaina ireo fampiharana ireo. Hihaino tsara ny vaovao momba ny fanombohana ireo Huawei Mate 30 eny an-tsena tsy ho ela isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Manantena i Huawei fa ho lafo indrindra ny Mate 30
Ny Vivo NEX 3 5G dia efa azo alefa mialoha